| Page 8 | Ministry of Industry
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်အား အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Loyola College မှ Professor ဖြစ်သူ Mr. Ranganathan . J မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ (၂၂)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်အား အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ချန်နိုင်းမြို့၊ Loyola College မှ Professor ဖြစ်သူ Mr. Ranganathan . J သည် ယနေ့နံနက် (၀၈:၄၅) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ(၂၂) ရက်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား”သို့ တက်ရောက်ပြီး အဖွင့် အမှာစကားပြောရာတွင်
အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ)မှ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆)၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား ဆောင်ရွက်ခြင်း
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် “ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အရည်အချင်းရှိသူများ ဖြစ်သည်အထိ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးခြင်း” ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာနသည် “တိုင်းပြည်၏စက်မှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သား များမွေးထုတ်ပေးရေးနှင့် ကဏ္ဍအလိုက် သင့်တော်သည့်လုပ်ငန်းခွင်များတွင် တာဝန်ယူထမ်းဆောင် နိုင်ရေး၊
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်အား တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Volume Group Limited မှ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Dean Montgomery ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ (၁၀)
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့်အား တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Volume Group Limited မှ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Dean Montgomery ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေးဘေးသင့်ပြည်သူများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်းမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေတို့ကို ကြည့်ရှုအားပေးခြင်း
“စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမောင်မြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းကင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေးဘေးသင့်ပြည်သူများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံကြက်ခြေနီ အသင်းမှ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေတို့ကို ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနှင့် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများကို ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်”
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ(၈) ရက်